Arzantina: Namoy ny Ainy Ilay Mpanakanto Luis Alberto Spinetta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2012 16:17 GMT
Luis Alberto Spinetta, “El Flaco“, iray amin'ireo mpiangaly rock malaza ao Arzantina, namoy ny ainy tamin'ny 8 Febroary 2012, noho ny tsy fahasalamany; tratran'ny homamiadan'ny havokavoka i Spinetta, natao fizahana tamin'ny volana Jolay 2011 izy. Nanjary fanta-bahoaka ny nahazo azy, tany amin'ny faramparan'ny taona iny, nandefa taratasy mampientam-po tamin'ireo mpankafy azy izy izay toy izao ny fanombohany:
Buenos Aires. 23 Desambra 2011. Luis Alberto Spinetta ny anarako. 61 taona aho ary mpanao mozika. Nanomboka fanta-daza aho tamin'ny volana Jolay raha tratran'ny homamiadana. Nahazo fitsaboana tsara avy amin'ny fianakaviana mamiko aho, avy amin'ny namako akaiky, sy ny dokotera mendrika indrindra eto amin'ny firenena. Noho ireo vaovao tsy marina navoaka, tiako ny mampahafantatra ny be sy ny maro ny amin'ny fahasalamako. Salama tsara aho, eo am-pitsaboana tena ho amin'ny fahasitranana tanteraka. […]
Luis Alberto Spinetta, sary avy amin'i Facundo M. Nívolo. Sary nahazoana alalana, Creative Commons license Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Tamin'ny volana Janoary, nampidirina tao amin'ny toeram-pitsaboana Cemic i Spinetta mba hodidiana ny tsinainy noho ny fisiana kambon-doaka (diverticulite), fizahana tsy misy ifandraisany amin'ny homamiadana mahazo azy. Tamin'ny 30 Janoary, 25 andro taoriana ny nidirany hopitaly, afaka nivoaka ny hopitaly izy ka afaka nody tany an-tranony.
Tamin'ny 8 Febroary, herinandro mahery kely, namoy ny ainy tao an-tranony i “El Flaco” , ary nohodidinin'ireo zanany: Dante, Catarina, Valentino ary Vera, araka ny filazan'ny gazety Arzantina Telám. Ary ireo zanany ireo ihany no nanomboka nandefa hafatra feno fanjoretra, alahelo ary fintaintainana, tao amin'ny valantserasera Twitter. [es]
Dante (@dantespinetta), tweet fohikely tao amin'ny twitter saingy manohina ny fo, hoy izy nilaza:
Tiako mandrakizay ianao, Dada.
Valentino (@Leeva_) kosa nandefa toy izao tao amin'ny kaontiny:
Tiako ianao Dada, ao an-tsaiko sy am-poko mandrakariva ianao.
Nanatsonga ny andalan-kiran'ny dadany i Catarina (@Cataspinetta) ni-tweet toy izao:
‘Tsy misy ny anjara tsy fantatra, na elanelan-tany manasaraka ahy aminareo…’ Fitiavana mandrakizay ho an'ny raiko ♥
Fihetseham-po tao amin'ny valantserasera
Tenifototra #chauflaco [veloma Flaco] nanjary lohahevitra malaza vetivety, nanangona ny tweet an'ireo mpisera maniry hizara ny fihetseham-pony manoloana ny vaovao nahafatesan'ilay mpanao mozika, iray amin'ireo naharitra ela indrindra tamin'ny fiangaliana rock tao Arzantina:
Mpisera Paula Castro (@_paucastro) nanasongadina hoe:
Malahelo miteny hoe #chauflaco… misaotra tamin'ireo tononkalo betsaka!
Mpanoratra Teknolojia Federico Wiemeyer (@wiemeyer) nampahatsiahy andinin-kiran”i Spinetta:
“Raha tsy mihira aho dia mahatsapa ny anatiko ho mihamaty” #ChauFlaco
Pablo Ferreyra (@PabloRFerreyra) nitomany:
Namoy ny ainy ny mpiangaly mozika Arzantina mendrika indrindra. Ny Iray halahelovako indrindra . Barro tal vez, flaco [andalan-kiran'i Spinetta midika hoe “Fotaka, angamba, Flaco.”]. #ChauFlaco
Mpisera Bruno Vaccotti (@peztresojos) nanatsonga an'i Spinetta ka nanazava ny fientanam-pon'ny olona:
“Anisan'ny fanahinao ny olona. Izaho ny olona rehetra.”hoy i #elflaco. Ka androany, misy fahafatesana kely avokoa amintsika rehetra. #chauflaco
Paula Zuviría (@pau_apichela) niitantara tranga fohy:
Nitomany ny mamako tonga tao amin'ny efitranoko ary nilaza hoe: Fa nahoana no tsy nolazainao tamiko fa maty i Spinetta? # chauflaco
Mpisera Cecilia Ann Tosh (@_CeciliaAnn) nanasongadina hoe:
Nahoana no malahelo mafy amin'ny fahafatesan'olona tsy fantatrao akory ianao? Satria nampanakarena ny fanahianao ny nataony. #ChauFlaco
Nihabetsaka ny hafatra avy amin'ny mpisera Twitter ary mety mbola tsy hiato izany rahampitso na amin'ny herinandro, izay rariny tokoa satria noraisin'ny maro ho toy ny mpiangaly mozika lehibe indrindra ao Arzantina izy. Ary raha avy amin'ny tsirairay mihitsy ny filazana tahaka izany, tsy azo lavina fa nisy fiantraikany teo amin'ireo mpanakanto maro ny talentany, ary ny lova navelany kosa dia hiraikitra ao am-pon'ny Arzantina sy ny kolontsain'i Amerika Latina.
“Ary marina foana izany, na mipetraka ianao na mandeha.”
21 ora izayKiobà